Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
ယဉ်ကျေးမှု အယောင်ဆောင် မပါတဲ့
စကားးကို အရိုးရှင်းဆုံးး ပြောတတ်လို့ ကို အထင်ကြီးးရတယ်..
မြန်မာတွေ က စကားးကို သကာအုပ်ပြောမှ နားးခံသာကြတာ…
စကားးပြတ်ပြတ်ပြေရရင် ကို စိတ်ဆိုးးတယ် မှတ်ကြတဲ့ အမျိုးးတွေ နဲ့ …
ဒေါ်စုတို့များ.. တော်တော်ကို ဗြောင်ပြောချလိုက်တာပဲ..။
ယူအက်စ်မှာ.. သမ္မတအတွက်မဲဆွယ်နေတဲ့.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပါ..ထိုင်ငိုသွားလောက်တယ်..။
ဒီလောက် ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်ယုတ်မာ လွန်း တဲ့ သူတွေ ကို ဒီလို လုပ်မှ။
နားလည်သလောက်ကတော့.. အဲဒီ ၂၅%ရှိနေလို့.. ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးတာဗျ..။
NLD သမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်မှာလဲဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားတယ် နိုင်ခဲ့ရင် (အမှန်တိုင်းဖြစ်လာရင်ပြောတာ)
တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ နိုင်ပြီးသားပဲ ပြောစရာကိုမလိုတာ
မနေ့က အလုပ်ထဲက နိုင်ငံခြားသားကျောင်းအုပ်က လာမေးတယ် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ နင်တို့လုံခြုံရေးက စိတ်ချရရဲ့လား တဲ့ ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့
စိတ်ချရတယ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်ဖူး လို့ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လောက်သေချာနေရတာလဲတဲ့
ငါ့မှာ ဆဌမ အာရုံရှိတယ်လို့ :loll:
အာဏာရချင်တယ်၊ သမ္မတ လုပ်ချင်တယ်လို့ စပြီးပြောခဲ့တာလဲ သူပဲလေ။
ပြောနေတဲ့ မျက်နှာပေး လေသံဟန်ပန်ကိုကြည့်ပြီး သဘောကျလိုက်တာ။
နိုဝင်​ဘာ ၈ ရက်​​နေ့ မဲ​ပေးနိုင်​ရန်​အတွက်​ သံဃာ ရှစ်​​သောင်း​ကျော်​ လူဝတ်​လဲ ဟု ကြားသိရပါ​ကြောင်း ဒူဟူဟူ
အဖွဲ့ချုပ်ရှုံးရင်.. မဘသကို သမိုင်းတရားခံအဖြင့်တင်လိုက်ကြ..။
Ant Bwe Kyaw ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်တွင် မဲရုံရှိ ကြိုတင်မဲထည့် မဲပုံးကို ဘုန်းတော်ကြီးမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ယူဆောင်မှု ဖြစ်ပွား
အဲဒီလို ညစ်ပတ်ယုတ်မာ တာ နိုင်ငံတော် ကို အသရေဖျက်တာဘဲ။
ဥစ္စ္စာရူး တွေမို့ ဥစ္စာ နဲ့ခြောက်မှရမလားဘဲ။
ထွက်ပေါ်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအပေါ် လေးစားလိုက်နာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ အစိုးရ၊ တပ်မတော် အနေနဲ့ တရားမျှတလွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများရဲ့ ရလဒ်ကို လေးစားလိုက်နာ သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကို ထပ်မံပြောကြားလိုပါ တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များနဲ့ အညီ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသစ်ကို အတူလက်တွဲ ပုံဖော်ဖန်တီး ဆောင်ရွက် သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ကို) မင်းကိုနိုင်၊ (ကို) ကိုကိုကြီး တို့ အပါအဝင် ၈၈ကြီးများ အတွက် လဲ တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
သေဆုံးသွားသည့် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာ ကြက်ခြေခတ်ထားသော်လည်း မဲအများဆုံးရ
Tuesday, 10 November 2015 06:15 Print Email
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၉
တကယ်လို့ ၁၉၉၀ ကို မှတ်မိမယ်ဆိုရင် အဲဒါက အခုအတိုင်းပါပဲ။ မေလ ၂၇ ရက်မှာ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြတယ်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ တကယ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ အားလုံး အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲတော့မယ်လို့ ပြည်သူတွေ တကယ်ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ၂ လကြာတဲ့အခါ၊ ၂ လ တိတိကြာတဲ့အခါ၊ န၀တ အစိုးရက ပါတီတခုကို အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးနိုင်ဘူး၊ တခြားပါတီတွေလည်း အမြောက်အများရှိသေးတယ်။ သူတို့ အတွက်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ သဘောရတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီအချိန်က ၄၈၅ ဦးရှိတဲ့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်အစား ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ နဲ့ သူတို့စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ထားသူ ၆၀၀ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသား ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ စိတ်ပျက် ဒေါသ ဖြစ်ခဲ့ရတာကို ကျနော် မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခု အချိန်မှာတော့ ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ကျနော် မထင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ ခေတ်အခါမှာ အဲဒါက အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ၊ Facebook နဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကထက်စာရင် အများကြီး ပွင့်လင်းလာပါပြီ။ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမှာက တကယ်လို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အမှန်တကယ် အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့က NLD ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။
အခုတစ်ခါမှာတော့ အရင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့သူက ပြည်သူကို အချိန်ကိုက် လိုက်နာသင့်တာတွေ သတိပေးတယ်။ ပြည်သူတွေက လေးစားလိုက်နာတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရော၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာရော တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာကတော့ အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ ထူးခြားချက်ပေ့ါ။
Speaking to Channel NewsAsia at her home on Tuesday (Nov 10), Suu Kyi said if NLD wins, the chosen president will be appointed “just to meet requirements of constitution”.
“He will have to understand this perfectly well that he will have no authority, that he will act in accordance with the decisions of the party,” she said.
“That is the only logical way to do it. Because in any democratic country, it’s the leader of the winning party that becomes the leader of the government. If this constitution doesn’t allow it, then we will have to make arrangements so that we can proceed along usual democratic lines,” Suu Kyi added.
Channel News Asia နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်တာဗျူး ရုပ်-သံ( 10.11.2015 ) ဘာသာပြန်
Don’t move closer to US, China paper warns Myanmar
ယူအက်စ်နဲ့ စိန့်ပြည်ကြား ဒေါ်စုတော်တော်ကစားယူရလိမ့်မယ်။
မတ်လ မရောက်မချင်း တက်မထောင်လို့ မရသေးဘူး
နိုင်ငံတကာဆိုတာက လဲ အရမ်းတော့ အားကိုးလို့ မရ ပါဘူး
လက်ရှိ စီးပွါးဖြစ်ပြီး သား လုပ်ငန်းအကြီးကြီးရှင် ခရိုနီ ကြီးများ က တိုင်းပြည် အဆိုးဘက်ရောက်သွားမှာ ကို ကျွန်မ တို့ထက် ပိုပြီး ကြောက်ပါတယ်။
ငိုးမအဆိုးဓမြလို စဲလျဲဒါ ဒီရွာမှာ အခြားမည်သူ ယှိသနီး… ငှါကွ..။
ငါလခွီး.. ငိုးမအဆိုးဓမြလို့ ဆဲတာ လမှာ အောက်ကမြင့် ကြံသွားတယ်..
Myanmar’s Election Sparks Online Calls for Elections in China
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ (ဦး)သန့်မြင့်ဦး ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က ကားကြပ်တာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် အစိုးရအသစ် ဆီက မျှော်လင့်ကြောင်း ရေးထားတာလေး ကို ဖတ်မိလို့ပါ။
ယူအက်စ်ဖက်က.. ကလင်တန်ဒေါ်ဒေါ် သမ္မတဖြစ်မှပဲအိုကေမယ်ထင်တာပဲ..။
KUNMING, Nov. 11 (Xinhua) — Chinese Foreign Minister Wang Yi said on Wednesday that China is confident that Myanmar will continue its friendly diplomacy towards the country.
17 Nov 2015 at 10:39 ET
သဂျီးလည်း လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ ကျော်က အခင်းအကျင်းကို လွမ်းသဂိုး…
စတာဘာ… စတာဘာ… ဟီ ဟိ
Save 30%–the year’s lowest price for AncestryDNA.